Ndezvipi zviitiko Best To Have In Switzerland | Save A Train
musha > Travel Europe > Ndezvipi zviitiko Best To Have In Switzerland
Ah, Siwizarendi, nyika yakanaka nerunyararo yakagara zvakanaka pakati Itari, Furanzi, uye Jerimani. Zvakakosha kushanya kuti uone kuti nei Switzerland ichienzaniswa seimwe yenyika dzinofara kwazvo pasirese. Saka unofunga kuti kana uchifunga 'Siwizarendi'? Ndiri guessing misoro yechando-yakafukidzwa, chizi, uye chokoreti. Pachava nenguva yakawanda chocolate fondue musi Swiss wako vacay, asi iva nechokwadi kuti zvinosanganisira zvose tsika, dzinongoitika, uye nhoroondo inotaura nyika iyi ine kupa. Kubva paakaita chitima Vatasvi uye gomo treks kuti rushaya-anodonha mapurani, Switzerland ine chinhu chokupa mumwe mhando mufambi mumwaka ose. Ngatitaurei kuputsa dzimwe vanofanira-kaksi nokuda kwenyu rwendo kuSwitzerland.
Dzidzisai kufamba chinhu chinoshamisa nzira kuona nyika duku iri. Kurenda motokari uye mugwagwa igumburwe kunogona kuva dika muchimiro chokufambisa munyika dzakawanda, asi achifamba nechitima muSwitzerland chinhu iconic ruzivo! The zvitima makachena, nenguva, vofamba mamwe mukare girl munyika. Mukuwedzera, vamwe chitima yenzira achine kwazvo-akachengetedzwa, risingakanganwiki chitima motokari kuti zvichaita kuti unzwe sokuti uri tsaru firimu! Vamwe yakakurumbira nzira dzinosanganisira Jungfraujoch, ari GoldenPass Line, uye Glacier Express. Zvimwe nzira idzi vanobatanidzwa pamwechete Eurail Pass, uye vamwe kuti havasi ichapa discounts kuna Eurail Pass yokuisira. Zvitima muSwitzerland havasi chipa nguva dzose, saka munhu pachine nguva shoma kunogona kukubatsira kuponesa vamwe mafranc, kana uri anofambira muchinjikwa-nyika kana chete kutora zuva rwendo!
Bern kuti Yopindirana neTreni
Lucerne Kuti Yakatambanudzirwa nechitima
Zurich Kuti Yopindirana neTreni
The Swiss Alps vari mumwe kupfuura iconic mitambo chando dzokugara munyika. Funga pamusoro mawere mazuva, nousiku curled naye noushamwari tii uye rinopisa ndiro cheesy muto. Kana uri kubva noushamwari ekunze uye havasati skied asati, chando nzendo zvakadai zvinogona chete sokuti chinhu munoona mumafirimu. Unogona kudzidza the chero nguva muupenyu hwako uye Switzerland ane zvakawanda plesieroorde kuti vari yakakwana kune vanotanga, ne the zvidzidzo uye tsuro zvikomo. plesieroorde zhinji kunyange kupa zvidzidzo vana, kuita Switzerland ane nzvimbo huru mhuri kuenda mberi state nzendo!
Zurich kuenda kuSt Moritz Chitiketi matiketi
Zermatt kuenda kuSt Moritz Chitiketi matiketi
Lyon kuenda kuSt Moritz Chitiketi matikiti
Basel kuenda kuSt Moritz Chitiketi matiketi
Caves vari kwete chinhu chokutanga ndakafunga kana ini kuronga rwendo rwangu Switzerland kana. zvisinei, Switzerland ine zvakawanda nemapako akanaka uye vanonakidza kushanya, kunyanya panguva inodziya mwedzi yezhizha.
Zurich kuenda kuZermatt Chitima nguva
Geneva kuenda kuZermatt Chitima nguva
Bern kune Zermatt Chitima nguva
Lucerne kuenda kuZermatt Chitima nguva
Izvi bako guru ane nyanza uye horo mabiko mukati unogona chaizvoizvo yamura pamusoro 400 vanhu uye kurenda nokuda zviitiko zvakadai retafura kunodya zvinenge, mapato, uye michato. Events ikoko iine DJs, vachitamba, uye musicians. Unogona kutora chitima chenhau kubva Vitznau kuti rakasiyana rwendo. Website yavo chete German, asi unogona kushandisa Google Chrome kutarisa chero mawebhusaiti emitauro yekune dzimwe nyika kuti uwane rumwe ruzivo rwekufamba - unogona kubatidza otomatiki shanduro!
St. kufara Ngwarira
The St. Beatus bako riri mumaoko pasi rimwe unoyevedza bako enyika munyika. Open kubva pakutanga vhiki pamusoro Kurume kuti vhiki yokutanga October, iri kuenda wakakwana vanhu kana mapoka kushanyira vokumadokero Switzerland iri warm kwemwedzi yegore. Unogona kuongorora mubako oga, kana kubatana mune rimwe anotungamirirwa Tours zvinoitika nguva yose zuva. Dogs unobvumirwa kubatana iwe mubako uyewo, asi unofanira kutenga suo tikiti kwavari! Vanobatanidzwa pamukova mutengo (chete kuti vanhu, ndine hurombo) ndiko kubvuma kuti St Beatus bako miziyamu, izvo uchakudzidzisai nhoroondo, ngano, uye zvemaumbirwo webako hurongwa!
Uyu ndiye mwedzi yechando. Glacier mumapako, aizivikanwawo chando mumapako, vasingawanzova ichi pindika. Kushanyira ichi otherworldy kubako yaigadzirwa chando yekare ndizvo kunofanira nokuti munhu Skiing pedyo Engelberg. Tutira yakaputirwa munguvo dzako akanyanya kupisa yechando uye traipse kuburikidza corridors webako rwebhuruu-hued akaita zvachose chando!
Shanyira Mumwe A Kind Museum
guta guru wese ane nhoroondo kana sainzi miziyamu iyo inotyisa kuputsa kweguta uye mazuva ekunaya. zvisinei, dzimwe nzvimbo dzine zvechokwadi yakasiyana mamiziyamu kuti kungoti havafaniri uchashayikwa. Vanhu vanobva munyika yose kushanyira H.R. Geiger miziyamu muna Gruyere.
H.R. Geiger munhu akakurumbira Artist Swiss kuti zvinozivikanwa pasi pose nokuda kwake macabre uye futuristic mumifananidzo. Unogona timuzive the artist akasika zvisikwa zviri bhaisikopo Alien. Kana uchida dzisingazivikanwi, quirky unyanzvi kunyudza pachako muna Geiger Museum nokuitevera kukwira aine coctail panguva Geiger Themed bhaa inotevera chitoro. Not aiziva unyanzvi hwake? Tora rakapotsa uchimuratidza miziyamu usati waenda.
Zurich kuenda kuGeneva Nguva dzechitima
Paris kuenda kuGeneva Nguva dzechitima
Lucerne kuenda kuGeneva Nguva dzechitima
Zvorudzi The Musha Fondue
Fondue ndiye imwe yakakurumbira ndiro kubuda Switzerland, uye ichi hachisi tsaona. Vanhu vave kudya yanyungudiswa chizi kubva zvaiita hari amakore kumadokero chiFrench chikamu Switzerland. zvisinei, ari 1930s neSwiss Cheese Union kutengeswa rinopikisa dhishi ichi munyika nepasi rese, kuchizivisa sechikafu chenyika cheSwitzerland senzira yekutengesa kuwandisa kwenyika chizi. Uye tinofara vakaita, uyo haadi yakanyauka chizi uye chingwa? Peya fondue wako rakaoma chena waini, uye ive shuwa kuti usapamhe-kunyudza!
Basel kuenda kuZurich Nguva dzechitima
Basel kuenda kuGeneva Nguva dzechitima
Basel kuti Yopindirana Nguva dzechitima
Basel kuBern Chitima nguva
Regai kukangamwa Pamusoro Chocolate
inguva yokuti zvechokwadi chikonzero uri kuenda kuSwitzerland – chokoreti! Switzerland rakanyatsojeka inozivikanwa kwayo chokoreti, uye iwe unogona kuwana akawanda emhando yepamusoro machokoreti pamakona emigwagwa kwese kwese munyika, zvisinei, Zurich ndiyo inozivikanwa ayo Tours zhinji chokoreti. Kune chokoreti yekushanya ku kukodzera bhajeti rega rega! Unogona kutora Mugovera mangwanani kufamba rwendo iyo inosanganisa guta rakamisikidzwa pamwe nemamwe akanakisa machokoreti mutaundi. Ungaedza achitora tichiona duku chokoreti fekitari, uye ruzivo nokuita kwako chokoreti bhaa. Nokuti kwoumbozha zvechokwadi yezhizha basa, tora chokoreti rwokuparidza nechikepe ku Lindt uye Sprungli fekitari.
Yakabatanidzwa kuZurich Nguva dzechitima
Lucerne kuenda kuZurich Nguva dzechitima
Bern kuenda kuZurich Chitima nguva
Geneva kuenda kuZurich Nguva dzechitima
Enda Top of Europe
Ok, zvino kuti mazadza uye chocolate chizi, inguva ndiende zvakare! Makomo Swiss havasi kuti chando Skiing! Pane mukare hikes chirimo kuti iwe unogona kuenda kumativi ose nyika, asi Jungfrau nharaunda anofanira rikakwira uri mugomo mazita. The Jungfraujoch ndiye yakakwirira muEurope pa 3,454 mamita (~ 11.330 tsoka) uye maonero haafaniri uchashayikwa. Kune njanji inokutora iwe kuenda gore rese kana usiri mukuru anofamba, kana iwe shanyira munguva yechando. Kana uri nokuda zvakaoma tarisa dzimwe nzira idzi munzvimbo. Vakawanda nzira vane yakanaka zvokudya uye chinwiwa establishments munzira, saka musafunganya, hamungambovi vanofanira ine nayo!
Une kufarira Nzvimbo kuSwitzerland? Ngatizive uye Usakanganwa, yakanakisisa Website kuti Order Anorovedza matikiti ndiro Save A Train
Unoda embed yedu Blog pambiru zviende yako nzvimbo, unogona kana kutora mapikicha edu uye rugwaro uye chete tipei kadhi rine Link kuti ichi Blog romukova, kana iwe tinya pano: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fbest-experiences-switzerland-winter-summer%2F%3Flang%3Dsn - (Mupumburu pasi zvishoma kuona Embed Code)
#awaniko #swisstrip travelswitzerland
Ndiri kufamba nyika nemurume wangu Patryk nemwanasikana Mia. Chinangwa changu chikuru kukurudzira vamwe kuti vararame hupenyu hwavo zvizere uye vasingazombomira kudzingirira zviroto zvavo! - Unogona baya pano ndibate